01/06/15 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
TechSmith Snagit 12.4.0 Build 2992 + Keygen Latest Version Full Version
Tuesday, June 30, 2015 AungKyaw No comments
ကွန်ပျူတာမှာ screen-capture လုပ်ချင်သူများအတွက် TechSmith SnagIt ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ရိုက်ပြီးထားသော ပုံများကိုလည်း text, arrows, or effects တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ထို့နောက် email နှင့် Web share ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။Full ဖြစ်ဖို့အတွက် Keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်
♪ ဖုန်းတိုင်းမှာရှိထားဖို့သင့်တော်တဲ့ Battery App: တစ်ခု - Battery Doctor (Battery Saver) v4.25 Apk (29-June) ♫
Tuesday, June 30, 2015 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
ဖုန်းတစ်လုံးမှာ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားရမယ့် Application တွေထဲမှာ Battery နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Application ကတော့ထိပ်ဆုံးနေရမှာရှိပါတယ်ဗျာ။ Battery Apk တွှေအများကြီးရှိတဲ့အထဲက အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Battery Doctor (Battery Saver) ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့အကြိုက်ဆုံး Battery Application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်းမှာရှိတဲ့ Battery သက်တမ်းကြာချိန်ကို အချိန်ကြာကြာအသုံးပြုနိုင်အောင်စွမ်းဆောင် သူ့မှာပါတဲ့ Save Power ဆိုတဲ့ Widget လေးတစ်ခုက Click တစ်ချက်ထဲနဲ့ Run နေတဲ့ Application တွေကို ပိတ်ပေးတဲ့ Feature ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲဗျာ။ အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Version မှာ Notification Bar မှာပြပေးတဲ့ Battery Icon စတိုင်တွေကအစအပြောင်းအလဲလေးနဲ့မိုက်လာပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
♪ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို ကြက်သွေးရောင်များနဲ့လွမ်းခြုံပြီးအလှဆင်ထားနိုင်မယ့် - NotOnlyRed theme CM12.0 12.1 v1.7 APK (28-June) ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Theme လေးကတော့ NotOnlyRed theme CM12.0 12.1 v1.7 ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ပုံစံလေးက တစ်ခါမှမတင်ထားရသေးပါဘူးဗျာ။ အသစ်အဆန်းလေးတစ်ခု အခြားသောဆိုဒ်တွေမှာ လည်း တင်ထားတာ မရှိသေးပါဘူး။ သေချာတာကတော့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဘယ်သူမှတွေ့ဖူး မှာမဟုတ်သေးတဲ့ Theme အသစ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ကြက်သွေးရောင်ကြိုက်သူများအတွက် ရှယ်ပေါ့ဗျာ။ ရုပ်ထွက် Resolution အနေနဲ့ကလည်း အထူးကောင်းမွန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Theme ရဲ့ ပုံစံလေးကို သိချင်ရင်တော့အောက် မှာ Screen Shoot တွေရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 5.0 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနင်္ိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။
Tuesday, June 30, 2015 Mr.Win Hlaing No comments
Tuesday, June 30, 2015 Unknown2comments
MTK ဖုန်းများအား အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း နဲ့ CWM ဖန်တီးပြီး သွင်းမယ်
Tuesday, June 30, 2015 Unknown 1 comment
MTK ဖုန်းများအား အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း နဲ့ CWM ဖန်တီးပြီး သွင်းမယ်။ Recovery.img နဲ့ Boot.img
1. MTK VCOM Drivers (Link: Click to download!)
2. SRS-Tool (Link: Click to download!)
3. MTKDroidTools (Link: Click to download!)
Back key ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ => Developer options => USB debugging ဘေးတွင်ရှိသော
Box လေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
ပြီးရင် back key ကိုတစ်ချက်နှိပ် => Security => Unknow sources
ဘေးတွင်ရှိသော Box လေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
ဖုန်းမှာ လုပ်ဆောင်စရာ မကျန်တော့ရင်
Install CWMR (ClockWorkMod Recovery) in MTK (Me
diaTek) Smart Phone
Solfware တစ်ခုခု ကို စမ်းသက်တော့မယ်ဆို အရေးကြီးဆုံးက DATA တွေကို Backup
လုပ်ထားဖို့ပါ။ ကိုယ့်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် Solfware ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်
DATA တွေပျက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြန်ရနိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့် စမ်းသက်တော့မယ်ဆို
ကိုယ့်ရဲ့ DATA တွေကို Backup လုပ်ထားပါလို့ စာရေးသူ မှာချင်ပါတယ်။Data တွေပျက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စာရေးသူလဲ ပြန်လုပ်ပေးဖို့ တက်နိုင်သူတစ်ယေက်မဟုတ်ပါဘူး။
1. Download လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုဖြည်ပါ။အထဲမှ MTK DroidTools ကိုဖွင့်ပါ။ပြီးနောက် Root button ကိုနှိပ်ပါ။(မှတ်ချက် ။ ။ ဖုန်းတိုင်း ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။Oneclick Root tool တစ်ခုခုနှင့် အရင်ဆုံး Root ဖောက်ထားကြည့်ပါ၊Root Access ရပါက busy box.apk install
လုပ်ထားပါ။box တစ်ခု ကျလာပါ OK နှိပ်ပါ။Root permanson တောင်းလျှင် Allow လုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် Install လုပ်ပါ။ခဏစောင့်ပြီးပါက Done ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့ MTK Droid tool နဲ့ပြန်ချိတ်လိုက်ပါ အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
2.MTK droid tool ရှိ root, backup, recovery ဆိုသောနေရာလေးကို တစ်ချက် ကလစ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ To use boot from phone ကိုရွေးပါ။
3.ထိုနောက် to make CWM recovery automaticall? လို့မေးခဲ့ရင် Yes button ကိုနှိပ်ပေးပါ။
4.ထိုနောက် yes ကိုပဲရွေးပေးပါ။ သတိထားရမှာကတော့ No ကိုမနှိပ်မိပါစေနဲ့ ဘာကြောင်လဲဆိုတော့ Boot.img ကို Flash မှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ပါ။
5.ထိုနောက် Install Created recovery to phone လို့မေးလာရင် YES ကိုပဲ နှိပ်ပေးပါ။
6.နောက်ဆုံး To reload phone in recovery? မေးခဲ့မယ်ဆိုရင် Yes ကိုပဲ ရွေးပေးပါ။ပြီးရင်
ဖုန်းဟာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ပုံလေးထဲက အတိုင်း CWM သွင်းပြီးပါပြီ။
Boot.img နဲ့ recovery.img ကိုတော့ MTK Droid tool file ထဲက recovery ထဲမှာ ၀င်ကြည့်လိုက်နော်။
လူကြိုက်များတဲ့ - MIUI6– Launcher Theme v4.0.1 Apk
Tuesday, June 30, 2015 ပုသိမ်နည်းပညာ No comments
လူကြိုက်များတဲ့ - MIUI6– Launcher Theme v4.0.1 Apk လေးပါ ဒီဇိုင်းလန်းပြီး ဘော်ဒါတွေအကြိုက်
တွေ့မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်အောက်မှာဒေါင်းပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
MIUI6– Launcher Theme v4.0.1 Apk | 19 MB | Resumable Links | Requires : Android 2.2 and up |
– 200+ Activities fix, 70+ new icons ( 280+ new app themed )
– MIUI6for CM/PA – theme chooser now available : https://goo.gl/HTFWiw
Lollipop &KitKat ဒီဇိုင်း လန်ချာလေး - KK Launcher Prime v6.33 Apk
Lollipop &KitKat ဒီဇိုင်း လန်ချာလေး - KK Launcher Prime v6.33 Apk လေးပါ Lollipop &KitKat ဒီဇိုင်းလေးကိုမှ သုံးခြင်တဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် (ပုသိမ်နည်းပညာ)
KK Launcher Prime (Lollipop &KitKat) v6.33 Apk |4MB | Resumable Links | Requires Android:4.0 and Up
KK Launcher is the Top 1 Lollipop & KitKat style launcher; Most Fast, Cool, Powerful
1. Fix purple glow issue, sorry for the bug
2. Fix cant change wallpaper in some cases
3. Optimize Game Boost folder
4. Enlarge icon size in big phone
TechSmith Snagit 12.4.0 Build 2992 + Keygen Latest...
♪ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို ကြက်သွေးရောင်များနဲ့လွမ်းခြုံ...
MTK ဖုန်းများအား အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း နဲ့ CWM ဖန်တီး...
လူကြိုက်များတဲ့ - MIUI6– Launcher Theme v4.0.1 A...
Lollipop &KitKat ဒီဇိုင်း လန်ချာလေး - KK Launcher ...
သီချင်းနဲ့ movie တွေဖုန်းမှာကောင်စွာ နားဆင်ကြည့်ရှု...
ဖုန်း user တွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ - 3C Toolbox Pro v1....
Snooker ကိုဖုန်းမှာ ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆော့ကစာ...
♪ မရပ်မနားပစ်ခတ်နေရမယ့် Game တစ်ခု Alien Bugs Defe...
♪ သေးသေးလေးနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Antivirus - Smadav...
FREE PROXY UPDATE (30.6.2015)
NOD32 LICENSE KEYS 100% WORKING (30.6.2015)
ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံး Storm Blades 3D ဂိမ်းလေးပါ
Systweak Disk Speedup 3.3.1.16619 Serial Key Final...
♪ Advanced System Optimizer v3.9.3636.16622 + Patc...
♪ Boom Beach v22.70 Apk + Offline Data ♫
Max ammo game update လေးပါ
ဖုန်းထဲကနေ မြန်မာသီချင်းခွေတွေကို ဒေါင်းယူနားဆင်နိ...
Candy ဒီဇိုင်း icon လေးနဲ့ ဖုန်းမှာလန်းနိုင်မယ့် -...
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version- Faceb...
VirtualDJ.Pro.8.0.Build.2177 Latest Version + Crac...
ကမ္ဘာကျော်ဂိမ်းကောင်းလေး - Machinarium v2.0.35 Apk
ဖုန်းမှာ movie တွေအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ - KMP...
FREE PROXY UPDATE (28.6.2015)
NOD32 LICENSE KEYS 100% WORKING (28.6.2015)
ဂိမ်းကောင်းလေး Beast Quest ဂိမ်းလေးပါ
IObit Driver Booster Pro 2.3.1.1 Full Version Size...
Facebook နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်လေး - Facebook v38.0...
ဖုန်းအား အမြန်ဝင်စေပြီး မပျက်ဆီးအောင် စောင့်ရှောက်...
နာမည်ကြီး - Smart Launcher3Pro v3.06.23 Apk
တစ်ချက် ကလစ်ရုံနဲ့ ဖုန်းမှာလေးနေတာတွေရှင်းလင်းပေးမ...
Samsung S5 ရဲ့3D ဒီဇိုင်း - S5 Live Wallpaper v: 2...
Nod32 License Keys 100% Working (27.6.2015)
Windows 10 ကို pen drive ဖြင့် Microsoft ရောင်းချဖ...
ကမ္ဘ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး ဖုန်းဖြစ်လာသည့် Samsung Galaxy S6...
TAIG IOS 8.3 JAILBREAK ERROR 1101, 1102, 1103 ဖြေရ...
ဖုန်းမှာလေးနေတာတွေရျင်းပေးမယ့် - Clean Master (Boo...
TaiG ကိုအသုံးပြုပြီး iOS 8.1.3-8.3 Untethered Jail...
strategy ဂိမ်းကောင်းလေး - Z Steel Soldiers v1.128 ...
♪ မြန်ဆန်ပေါ့ပါးစွာဖုန်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် - PROtun...
Free Proxy Update (26.6.2015)
Nod32 License Keys 100% Working (26.6.2015)
Facebook ကိုလျှင်မြန်စွာသုံးနိုင်တဲ့ -Fast Pro v2....
ဖုန်းမှာ ပုံတွေmovie တွေကိုညကြည့်မှန်ပြောင်းဒီဇိုင...
Launcher Theme ဒီဇိုင်းအလန်းလေး - Clix – Launcher ...
All Windows And Office Activator (Window 10,8,8.1,...
Xiaomi Mi4i Android 5.0.2 ကို Root ဖေါက်နည်း
♪ အနက်ရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် Theme လေးတစ်ခု...
ဖုန်းမှာမ၀င်စေခြင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ မက်ဆေ့စ် တွေက...
Live Wallpaper ဒီဇိုင်းအလန်းစားလေး - Ultra Wave Li...
ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး - WWE Immortals v...
Free Proxy Updates (25/6/2015)
♪ ခက်ခက်ခဲခဲ ခရီးကြမ်းလမ်းကြမ်းတွေမှာမောင်းရမယ့်ဂိ...
COC မှာ မြန်မာလို ပြောချင်သူများအတွက်
NOD32 USERNAME AND PASSWORD 100% WORKING (25/6/201...
♪ ဘောလုံးဂိမ်းကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု - New Star Socc...
♪ Galaxy စတိုင်လေးနဲ့လန်းချင်သူများအတွက် - Theme -...
♪ Torrent Movie Downloader v2.4.2 (Ad Free) Apk (2...